नेपाल लाइभ सोमबार, वैशाख ६, २०७८, १५:५४
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा उनले नेपाल अर्कोको पतिका लागि सती गइरहेको टिप्पणी गरे।
'सती प्रथा अन्त्य भइसक्यो। त्यो प्रथा रहँदा पनि ती बिचरा अबला नारीहरुलाई आफ्नो पतिको नाउमा सती पठाइन्थ्यो। तर, आज माधव नेपालहरु अर्काको पतिको लागि सती गइरहेका छन्। आफ्नो पार्टीको सरकार ढालेर अरुको सरकार बनाउन सांसदहरुलाई फाँसी चढाउँदै छन्। यो उनको ऐतिहासिक अपराध हो', बैठकमा ओलीले भने।
बैठकमा सम्बोधन गर्दै ओलीले नेपाललाई कारबाही हुने जानकारी दिएको सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए। 'माधव नेपालले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक अलोकतान्त्रिक, गैरसंसदीय, अराजक हर्कत गरेका छन्', ओलीको आरोप थियो।
ओलीलाई नेपाललाई एमालेलाई प्रचण्डको पाउमा चढाएको बताए। 'कांग्रेस लगायत गैर कम्युनिस्टहरुको नेतृत्वमा सरकार बनाऔं। हामी 'फ्लोर क्रस' गर्छौँ। यो सरकार तुरुन्त ढाल्नुपर्योा भन्दै रोदन गरेर घरदैलो गर्न थालेका छन्', ओलीले भने, 'अराजक, अस्थिर, अत्यन्त घातक, देशद्रोही, कम्युनिस्ट अन्दोलनलाई खाडलमा हाल्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध पार्टीले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नेछ।'
ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को पनि आलोचना गरे। ओलीले गोयलसँग सहमति गरेको भन्दै प्रचण्डले नै आफूविरुद्ध कुप्रचार गरेको आरोप पनि लगाए। उनले प्रचण्ड दुई मुखे प्रवृत्तिको भएको पनि बताए।
'एक मुखले देशभक्तिको कुरा गर्छन्। अर्को मुखले राष्ट्रघाती काम गर्छन्। एकातिर न्याय र सुशासनको कुरा गर्छन्। अर्कोतिर आपराधिक कर्म र भ्रष्टाचार गर्छन्', उनले भने।
'संघीयता विरोधी, अलोकतान्त्रिक, अराजक, अनुशासनहीन काम गर्ने, समानान्तर कमिटी बनाउने र फ्लोर क्रस गराउनेसम्मको अपराध गरेकाले इतिहासले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कंलकको टीका लगाउने छ', ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले जानकारी दिए, 'केपी ओलीलाई घोक्र्याउँछु, धुलो चटाउँछु, भित्तामा टाँस्छौ भन्दै हिँड्ने प्रचण्ड र माधव नेपाललाई अब जनताले धुलो चटाउने छन् र भित्तामा टाँस्नेछन्।'
ओलीले पत्रकार महासंघको चुनावमा प्रेस चौतारीको विरुद्ध ११ संगठन मिलेर हराएको पनि चर्चा गरे। केपी ओलीलाई सबक सिकायौं भन्नेहरुप्रति उनले 'महासंघ जितेर के भयो? के उपलब्धि प्राप्त गरे?' बुझ्न नसकिएको टिप्पणी गरे।
'अब ४ पार्टी मिलेर हामीलाई चौथो बनाउने रे! ठीक विश्लेषण गर्नुभयो। अब एमाले 'वन टु वन' भिड्दैन। सबै मिलेर आउनु', उनकाे चेतावनी थियो, 'प्रचण्ड र माधव नेपाल अबको चुनावमा कहाँबाट लड्ने हो? कसरी संसद् हुने हो? चुनाव पछाडि गठबन्धन बनाउन पनि कोही आउने छैन। त्यही भएर उहाँहरुका लागि चुनाव प्रतिगमन नै हो।'